Soo dejisan Dailymotion 4866 – Vessoft
Soo dejisan Dailymotion
DailyMotion – a adeeg video caanka ah si aad u eegto content infotainment ah. Bogga guriga software soo bandhigayaa xiiso video clips kuwaas oo ku taliyay Tifaftirayaasha adeegga ama dhigmaan sida ay danta isticmaala. DailyMotion kuu ogolaanaya in aad ka raadin video in database badan oo video clips oo loo qaybiyey qaybaha kala duwan. DailyMotion u saamaxaaya in ay abuuraan Playlists, upload videos in adeegga iyo subscribe in channels aad jeceshahay. DailyMotion sidoo kale taageertaa .Wadashaqayntaas of video clips, in kuu ogolaanayaa inaad daawato video aan heli karin internet.
Database badan oo video clips
Qudha oo si siyaabo kala duwan,
Waxay abuurtaa Playlists
.Wadashaqayntaas Of videos
Meeshay tayo bandhigay ah
Dailymotion Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... ooVoo 2.2.9.3169